Uluququzelela njani uLuhlu loMtshato
Umngcelele womtshato, okanye ukungena kwitheko labatshatileyo, kwenzeka ngolungelelwano oluthile olufikelela kuvuthondaba kunye nomtshakazi. Umngcelele womtshato uqala emva kokuba zonke iindwendwe zihleli phantsi kwaye nomngcelele (umculo) uqalile. Iindwendwe zomtshato ziyahluka, kuxhomekeka kwisitayile somsitho, kodwa indlela yemveli yokubonakala (ngakumbi kumtshato wamaKristu) imi ngolu hlobo lulandelayo:
Umntu osebenzayo, umyeni kunye nendoda ebalaseleyo bathatha indawo yabo baya ngasekunene kwesibingelelo, bahlala bengena ngomnyango osecaleni, kwaye bajongane neendwendwe.
Abakhwenyana bangathatha indawo yabo kunye nomyeni kunye nendoda ebalaseleyo okanye bahambise abakhonzazana ezantsi kwendlela (umkhwenyana ngasekhohlo, umyeni olungileyo). Ukuba bayabakhapha abatshakazi, banokuhamba kunye nabo ngasemva kwendawo yomsitho okanye baqale ngomyeni kwaye badibane phakathi esihlalweni, babaphelekezele yonke indlela. Xa befika esibingelelweni, bajike bajongane neendwendwe.
Abafazi abatshatileyo bangena ngasemva kwendawo yomsitho, nokuba bodwa okanye nabagadi.
ipilisi eluhlaza nephuzi
Emva kokuba befika esibingelelweni, bajike bajongane neendwendwe. Zama ukulungelelanisa abalindi ngobude, mfutshane ukuya kweyona inkulu kwicala ngalinye, kunye nokuhamba okufutshane kuqala.
Umkhonzazana okanye umntu ophethe imbeko ngowokugqibela kubafazi bomtshakazi wokuhamba ezantsi, nokuba kukodwa okanye kunye nendoda ebalaseleyo.
Umntu ophethe iringi uhamba ngokulandelayo.
Intyatyambo ingena kanye phambi komtshakazi.
Kuyamkeleka ukuba umphathi wesangqa kunye nentombazana yeentyatyambo zingene kunye. Kuxhomekeke kubudala babo, intombazana yeentyatyambo kunye nomntu ophethe iringi banokuhlala neentsapho zabo endaweni yokuma nabanye abalindi.
Kuqhelekile nakumntu ophethe iringi kunye nentombazana yeentyatyambo ukuba ithengise iindawo kunye nesicakakazi okanye umatron wembeko (njengoko kubonisiwe kulomfanekiso ulandelayo).
Okokugqibela ukwehla ezantsi ngumtshakazi, oqhele ngokwesiko ukuhamba nengalo yakhe yasekhohlo.
Abanye abatshatileyo bakhetha ukuba umtshakazi ahambe ngasekunene ukuze kungabikho mntu uphakathi kwakhe nomyeni xa efika esibingelelweni.
Ngokwesiko, umkhaphi womtshakazi usekunene kwakhe, kodwa uzive ukhululekile ukwaphula isiko.
Qiniseka ukuba abagcini bakho baziqhelanisa nokuhamba imiqolo emithandathu ukuya kude kwaye behamba ngokuzolileyo phantsi kwezitulo xa beqhelisela. Uvalo luthanda ukwenza ukuba abantu bangxame ukuhla ezantsi - okungakwenzeli ukungena okuhle kakhulu.
Inkqubo ephambili yamaJuda imi ngolu hlobo lulandelayo:
I-cantor kunye norabi bathatha indawo zabo phambi kwendawo yomsitho.
Ootatomkhulu noomakhulu, belandelwa ngoomawokhulu bomyeni, banokukhetha ukuthatha inxaxheba kumngcelele endaweni yokuhlala ngaphambili.
Abangenisi bafaka ezantsi iipaili ngababini (imfutshane kuye kweyona inde), ilandelwe yeyona ndoda ilungileyo emva koko ibe ngumyeni, onokuthi okanye angakhathalelwa ngabazali bobabini, unina ngasekunene notata ngasekhohlo.
Oomolokazana banokuhamba bodwa okanye ngababini.
Isicakakazi okanye umatron wozuko ungena emva kwabo bonke oomolokazana, elandelwa ngumntu ophethe iringi emva koko intombazana yentyatyambo.
Umtshakazi ungena okokugqibela, kunye nomkhaphi kwicala lasekunene. Ukuba umtshakazi uhanjiswa ngabazali bobabini, umama wakhe ulapha ngasekunene, kwaye utata ngapha ngasekhohlo.
Kwezinye iinkqubo zomtshato zamaJuda, bobabini abazali bahamba nomtshakazi.
zithini iziphumo ebezingalindelekanga ze-levaquin
ukutshaya ngelixa likwi-wellbutrin
Iziphumo zokumisa i-zetia
yintoni eyomeleleyo i-norco okanye i-percocet
uziva njani u-norco
Ubungakanani bephrofayili yobungakanani bomfanekiso wesangqa
iziphumo ebezingalindelekanga kwi-melatonin